तरकारीको भाउ छोइनसक्नु ! | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home पत्रपत्रिकाबाट तरकारीको भाउ छोइनसक्नु !
तरकारीको भाउ छोइनसक्नु !
२ जेठ, काठमाडाैं । उपत्यकामा हरियो तरकारीको भाउ अचाक्ली बढेपछि उपभोक्तालाई दैनिक चलाउनै हम्मे परेको छ ।
खडेरीले उत्पादन घटेपछि तरकारीको मूल्य साढे ३ सय प्रतिशतसम्म बढ्दा भान्सा अचाक्ली महँगिएको उपभोक्ताहरु बताएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
आलु, बन्दा, काउली, मुला, मटरकोसा, घिउसिमी, लौका, हरियो फर्सि, भिन्डी, साग लगायतका तरकारीको भाउ बढेपछि उपभोक्ता मारमा छन् । उसै त महँगो तरकारी व्यापारी ब्यापारीको मनोमानीले किनिनसक्नु भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
वर्षदिनअघि जेठ १ कै दिन ११ रुपैयाँ किलोमा किबेच भएको आलु शनिबार ३३ रुपैयाँमा किनबेच भयो । आलूमा २ सय प्रतिशत भाउ बढेर किलोमै २२ रुपैयाँ बढी परेको हो । घिउसिमी ३ सय ४७ प्रतिशतले बढेर किलोका ८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
खुल्ला अर्थराजनीतिको फाइदा उठाँउदै व्यापारी उपभोक्ता लुट्न एकजुट भएको उपभोक्तवादीको आरोप छ ।
घुस नपाएपछि भारतीय प्रहरीले कुटे ट्यांकरटरचालक
किर्ते कागज बनाई एयरपोर्टको जग्गा बिक्री